Scholes Oo Dhulka La Dhacay Manchester United: "4-0 Ayey Liverpool Ku Hoggaamin Doontaa Qaybta Hore, Kamana Daba Iman Karaan" - Laacib
HomeWararka CiyaarahaScholes Oo Dhulka La Dhacay Manchester United: “4-0 Ayey Liverpool Ku Hoggaamin Doontaa Qaybta Hore, Kamana Daba Iman Karaan”
Halyeyga Manchester United ee Paul Scholes ayaa digniin culus u diray kooxdiisa horekaddib guushii 3-2 ahayd ee ay xalay ka gaadheen Atalanta, waxaana uu u sheegay in Axadda ay u diyaar-garoobaan xasuuq ay Liverpool ugu geysato Old Trafford, isaga oo dhinaca kalena bandhiggooda qaybtii hore ee ciyaartii xalay ku tilmaamay ‘qashin’.
Cristiano Ronaldo ayaa gool madax ah oo uu u dhaliyey daqiiqaddii 81aad waxa uu Manchester United ugu go’aamiyey guul soo laabasho ahayd oo ay ka gaadheen Atalanta oo qaybtii hore ku hoggaaminaysay 2-0, waxaana labada gool ee kale ee United saxeexay Marcus Rashford iyo Harry Maguire oo meesha ka saaray goolasha Mario Pasalic iyo Merih Demiral ay u dhaliyeen kooxda martida.
Natiijadani waxay culays badan ka furatay Ole Gunnar Solskjaer oo khatar badan geli lahaa haddii laga badin lahaa, laakiin Scholes waxa uu macallinka reer Norway u baqayaa ciyaarta Premier League ee Axadda ay ku qaabbilayaan Liverpool.
Scholes oo ka hadlayey telefishanka BT Sports markii ay dhamaatay ciyaartii xalay ayaa yidhi: “Waa inaad u dabbaal-degto guul kasta, Miyaanay sidaa ahayn? Aniga qaybtii hore ayaa walwal igu haysa.
“Sidii aan horeba u sheegay, dadku waxay igu tilmaamayaan mid kharriban, waxaana laga yaabaa in taageereyaashu ila yaabaan, laakiin waxa aan eegayaa oo aan ka fikirayaa ciyaarta Liverpool ee Axadda, waxa aan ka fikirayaa Manchester City, waxa laga yaabaa waxa qaldan ee la samayn karo.
“Sababtoo ah, United meel walba way joogtay qaybta laakiin way kala daadsanaayeen, iskumana xidhnayn. Waxay haysteen laba ciyaartoy oo khadka dhexe ah oo iskood u ciyaaraya.”
Mar la weydiiyey sababta uu uga walaacsan yahay kulanka Liverpool, waxa uu yidhi: “Haddii aad sidaas oo kale samayso kulamada Manchester City ama Liverpool, waxay qaybta hore noqonaysaa 3-0 ama 4-0, ciyaartuna waad ka baxaysaan, mana soo laaban kartaan.”
Dhinaca kale, waxa uu Scholes tibaaxay in dedaalkii iyo niyaddii ay Manchester United ku ciyaartay qaybta dambe ay ahayd mid heerkeedu sarreeyo, laakiin aanay taasi u shaqayn doonin haddii kooxaha waaweyn ee Premier League ay qaybta hore fursado siiyaan.
Waan runti paul scholes